Dutchtown, စိန့်လူးဝစ္စရှိ MO မှ DutchtownSTL.org တွင်အနုပညာရှင်
အဆိုတော်အနုပညာ, 2643 ခြာရိုကီစိန့်
ဖြစ်ရပ် 17:5 pm တွင် @ ဒီဇင်ဘာလ 30
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ နေထိုင်သူများ၊ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်ခြာရိုကီလမ်းကိုစိတ်ဝင်စားသောအခြားသူများအားလုံးကိုတက်ရောက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ခြာရိုကီလမ်းအသိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်မှုခရိုင် အစည်းအဝေး။
ခြာရိုကီလမ်း CID လူထုအစည်းအဝေးအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 19:5 pm တွင် @ ဒီဇင်ဘာလ 30
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ နေထိုင်သူများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များနှင့်ခြာရိုကီလမ်းကိုစိတ်ဝင်စားသောအခြားသူအားလုံးအားကြိုဆို။ အားပေးခြင်းအားဖြင့်ခြာရိုကီလမ်းအသိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်မှုခရိုင်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ဖြစ်ရပ် 18:5 pm အချိန် @ ပြီလ 30
Alderman President Forum ၏ ၉ ရပ်ကွက်ဘုတ်အဖွဲ့
ဖြစ်ရပ် 20:2019 pm တွင် @ ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 30
အဆိုပါ join 9th ရပ်ကွက်ဒီမိုကရက်ပါတီ Aldermen ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကPresident္ဌရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူများထံမှကြားနာရန်ဖိုရမ်တစ်ခုအတွက်။
Alderman President Forum ၏ ၉ ရပ်ကွက်ဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဖြစ်ရပ် 9:2019 pm တွင် @ ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 00
Artist Art သည်အမြန်ဆုံးမြန်ဆန်သည့်ချိန်းတွေ့ခြင်းပွဲတစ်ခုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီးနောက်ခံအမျိုးမျိုးမှလိင်၊ လူမျိုး၊
ဖြစ်ရပ် 4:2018 pm တွင် @ အောက်တိုဘာလ 6, 30
နို ၀ င်ဘာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကျင်းပမည့်စည်းဝေးပွဲအတွက်သင်၏ ၉ ရပ်ကွက်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းပါ။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် Ald ထံမှဥပဒေပြု update ကိုပါလိမ့်မယ်။ ဒန် Guenther နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်9နှင့် 1, အဆိုပြု B နှင့်လေဆိပ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အားထုတ်မှုအပေါ်ဟောပြောသူများ။ လာကြည့်ပါ Facebook အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
ကျင်းပနှင့်တက်ကြွ: Gravois ဂျက်ဖာဆန်အစီအစဉ်မွေးစားခြင်း
ဖြစ်ရပ် 30:2018 pm တွင် @ ဇူလိုင်လ 6, 00
အဆိုပါ Gravois ဂျက်ဖာဆန်သမိုင်း ၀ င်အိမ်နီးချင်းစီမံကိန်း စိန့်လူးဝစ်၏စီမံကိန်းကော်မရှင်မှမေလတွင်တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဦး စားပေးထောက်ခံချက်များကိုစစ်ဆေးပြီးအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားရန်ဤပျော်စရာပွဲတော်မှရပ်နားပါ။ ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်အပေါင်ထားပါ!
Celebrate and Activate အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။ Gravois Jefferson Plan Adoption
ဒီနေရာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 11th, 2020 .
ဒိန်းမတ် သောနေရာများ အဖြစ်အပျက်နေရာများ အနုပညာရှင်အနုပညာ